ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို တကယ်သတ်ခဲ့တာ သင်ဘယ်သူလို့ ထင်လဲ ဒီစာအုပ်ဖတ် | အိုင်တီဖိုးသားလေး(နည်းပညာ)
3D Studio Background (56.7 MB)
Blogspot နှင့် ဘလော့ဂင်းနေသူများ သို့ အထူးသတိပေးချ...
Samsungဖုန်းတစ်ချို့ အင်တာနက်မသုံးဘဲ ပိုက်ဆံတွေအလ...
Firefox Setup Stub 30.0
G730 တွေရဲ့ မြန်မာစာပြသနာ ချုပ်ညိမ်းသွားပါပြီ....
Photo Suite For Android
အွန်လိုင်းမှာ စိတ်ကြိုက် ရှာပုံတော်ဖွင့်ပေးမယ့် Si...
Easy USSD V2.1 Update
Recover Mode ထဲ မ၀င်တတ်ဘူးဖြစ်နေတဲ့သူတွေအတွက် Quic...
ဖုန်းထဲကနေ Docs To Go လေး ထည့်ပြီးသုံးကြည့်မယ်
G730-U00 ကဲ့သို့သော မြန်မာ App များအပေါ်တွင် ဇော်ဂျ...
Android Office apk
APK တွေကို ကွန်ပျုတာ မသုံးပဲ Android Phone ဖြင့်မြ...
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို တကယ်သတ်ခဲ့တာ သင်ဘယ်သူလို့ ထ...
Y330-C00 Network unlock
Hacking စာအုပ်ပေါင်း၄၀ ကျော်
IMEI null ဖြစ်နေသော Galaxy S3/S4/Note2 Error ဖြေရှ...
Gmail နဲ့ Facebook ကို ၁၀ မိနစ်အတွင်း အကောင့်သစ် တ...
ဖုန်းထဲကနေ Root ဖောက်ချင်ကြသူများအတွက် စုစည်းမှုလေ...
ဦးသန်းရွှေ (သို့မဟုတ်) နေပြည်တော်မင်းသားကြီး
Huawei ဖုန်းအမျိုးအစား 12 မျိုးကို Nework Unlock န...
MECTEL 1500တန်ဖုန်းများနှင့် GSM/WCDMA/CDMA များပါ...
Huawei Y330-C00 အတွက် Network unlock.bat
FlashBoot Mode , Recovery Mode, Download Mode, Re...
GPGEMMC Box နဲ့ EMMC IC ကို ပြန်ရေးနည်း (Ko Nayla)...
G730 , Honor ဖုန်းများတွင် မြန်မာစာဖောင့်အဆင်မပြေသ...
ရဲမင်းအောင် (Ray Electronic)ရေးသားတဲ့Android Phone...
Windows 8 အတွက် Zawgyi-One Font ၊ Zawgyi keyboard၊...
Facebook ကVideo တွေ ဒေါင်းလို့ရတဲ့ Facebook APK 5....
Huawei G730 မြန်မာစာ 100% မှန်အောင်ပြုလုပ်နည်း
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို တကယ်သတ်ခဲ့တာ သင်ဘယ်သူလို့ ထင်လဲ ဒီစာအုပ်ဖတ်
Posted by တော်ဝင်မင်းသားလေး | Labels: E Book
အပြည့်အစုံဖတ်ရန် >> http://www.mssk.info
စာအုပ်လေးကောင်းလို့ မျှဝေတာနော်မသိလို့ မဖတ်ဖြစ်မှာစိုးလို့ ပါကျနော်တို့ တွေ
လုပ်ကြံကြသလဲဆိုတာ...Who Kill General Aung San ? ကပြောပြပါလိမ့်မယ်
ဦးခင်အောင်သည် ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်းနှင့် အာဇာနည်များ လုပ်ကြံခံရမှုကြီးတွင် ပါဝင်ခဲ့သူတချို့နှင့် ပတ်သက်၍လည်းကောင်း၊ ဖြစ်ပျက်ခဲ့သော အခြေအနေအရပ်ရပ်နှင့် လည်းကောင်း ကိုယ်တိုင် အတွေ့အကြုံရှိခဲ့သည်။ ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်းတို့ လုပ်ကြံခံရချိန်တွင် ဦးခင်အောင်သည် အတွင်းဝန်ရုံးနှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင် တဖက်ကမ်းရှိ ရေတပ် ကမ်းနားဌာနချုပ် ပြုလုပ်ထားသော စိန့်ပေါလ်ကျောင်းဝင်းတွင် ရေတပ်အရာရှိတဦးအဖြစ် တာဝန်ကျနေသည်။ ဗြိတိသျှ မော်ကွန်းတိုက်ရှိ အထောက်အထားများနှင့် စာအုပ်စာတမ်းများကို လေ့လာ၍ Who Killed Aung San? စာအုပ်ကို ရေးသားပြုစုခဲ့သည်။
လုပ်ကြံမှုဖြစ်ပွားစဉ်က ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း၏ ဘေးတွင် ကပ်ထိုင်နေခဲ့ပြီး ကျည်ဆန် ချော်ထွက်သွားသောကြောင့် အသက်မသေခဲ့သည့် ဦးခင်အောင်၏ ဦးလေးဖြစ်သူ ဦးရွှေဘော်ကိုယ်တိုင် ပြန်ပြောပြခဲ့ခြင်းက ဤ စာအုပ်ရေးသားရန် လှုံ့ဆော်ခဲ့သည့် အကြောင်းရင်း ဖြစ်သည်ဟု စာအုပ်အမှာတွင် ရေးသားထားသည်
saw latt said...